Tohodrano mamokatra herinaratra 28 megawatts no amboarin’ny Tozzi energy ao Mahitsy. 11 juillet 2018
Ny ankamaroan’ny herinaratra vokatra kosa dia ampidirina amin’ny zone interconnecté Antananarivo, izay mamatsy an’Antananarivo sy ny manodidina hatrany Antsirabe. Fambolena sy fiompiana no tena ifotoran’ny mponina any an-toerana. Midika izany fa tena ilain’izy ireo io reniranon’Ikopa izay mandalo eo io.
Voalaza koa moa fa hisy ny fitazonana ny rano mba ahafahana mampandeha mandavan-taona ny tohodrano, ahafahany mamokatra herinaratra. Ny tsy fantatra kosa dia ny fahafahan’ny mponina mampiasa ny renirano izay hotazomina amin’ny fanondrahana ny voliny.